Fankalazana ny mozika Jazz :: Raikitra ny fifaninanana ho an'ny mpitendry sy mpihira • AoRaha
Fankalazana ny mozika Jazz Raikitra ny fifaninanana ho an’ny mpitendry sy mpihira
Mitsingerina amin’ity taona 2020 ity ny fahafolo taona nisian’ny « Jazz@Tohatohabato ». Nanapa-kevitra amin’ny fanatanterahana fifaninanana ho an’ireo mpitendry sy mpihira jazz ry zareo mpikarakara an’io hetsika io, na dia mihemotra amin’ny fotoana manaraka aza ny fanamarihana ny tsingerin- taona noho ny hamehana ara-pahasalamana.
Manana safidy malalaka ny mpifaninana, mpitendry na mpihira, amin’ny fitondrana sanganasa iray mifandraika amin’ ny lohahevitra tsingerin-taona nahaterahana. Afaka mandray anjara avokoa na olon-tokana na tarika. Tsy voafetra ny taonan’ny mpandray anjara. Alohan’ny alahady 20 septambra 2020 no handefasan’ny mpifaninana amin’ny adiresy mailaka «il@cgm-mada» ny rakitsary mirakitra ny mozika tendreny na hirainy.
Komity manokana no hifantina ireo sanganasa heverina ho tsara sy mendrika. Halefa amin’ny pejin’ny tambajotra Faceebok an’ny CGM/GZ izy ireo, ka ny mpanaraka ny pejy no haneho ny heviny. Halefa amin’ny fahitalavitra mandritra ny fety lehibe fampahalalana ny «Jazz@Tohatohabato» kosa ireo maro mpifidy indrindra.
Fitaterana amin’ny RN2 – Rodobe ny an’ireo mpandeha nihazo an’Atsinanana